Isu tinokuratidza maitiro ekuona iyo WWDC 2021 mharidzo zvakare | Ndinobva mac
Tinokuratidza maitiro ekuona mharidzo yeWWDC 2021 zvakare
Masikati ano panguva nomwe dzeSpanish, Tim Cook uye timu yake yevashandi vakatiitira iyo mharidzo nyowani nyowani sekutanga kwemusangano weWWDC 2021.
Mariri vakatipa nhau dzatinogona kuona mune dzakasiyana software yeApple zvishandiso, uye imwe sevhisi nyowani senge iCloud +. Kana iwe usina kukwanisa kuitevedzera irarame, tinokuratidza maitiro aungaitarisa kuti yakanonoka.
Mharidzo yeApple Developer Musangano, inozivikanwa WWDC, zvino yapera. Mariri, Tim Cook, Craig Federighi, nevamwe vese vanobatsirana vakatipa isu, nhau dzatichava nadzo iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, WatchOS 8 y tvOS 15. Hapana kana chinhu.
Kana iwe usina kukwanisa kuitevera kamwe chete, kana iwe uchingoda kuiongorora zvakare, isu ticha tsanangura maitirwo azvo kana yapedza.
4 Pawebhu Apple
Kana iwe usiri kuda kuomesa hupenyu hwako, vhura iyo application Apple TV + uye uchazviwana pabutiro. Kwete chete kuti iwe unowanikwa kune ese maApple zvishandiso zvine skrini, asiwo pane Smart TV, Android TV, uye akasiyana evhidhiyo consoles. Pano ichavhura zvakananga chiitiko ichi mukushandisa.
Imwe nzira yepasirese yekudzokorora chiitiko ichi. Unogona kuiona zvakare pane yepamutemo Apple chiteshi pa YouTube.
Inogona kunge iri nzira isinganyanyozivikanwa, asi iwe zvakare unokwanisa kuwana iyo mharidzo mu chikafu de Apple podcasts.
Zvingave sei zvikasadaro, pane iyo webhusaiti yekambani iwe unowanawo mharidzo yemasikati iyi. Inowanikwa zvese mu dandemutande Apple main senge iri Zviitiko zveApple.
Saka kana iwe uchinge warasikirwa ne Keynote kurarama, iwe hausisina chikonzero uye iwe une nzira dzakasiyana dzekunakidzwa angangoita maawa maviri echiitiko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Tinokuratidza maitiro ekuona mharidzo yeWWDC 2021 zvakare
Iwo ekutanga betas eIOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8, macOS Monterey ave kuwanikwa
WatchOS 8 yakazarurwa paWWDC 2021